Ukusebenza nohlelo lweLinux Porteus kukhompyutha ye-PC | Izindaba zamagajethi
Umbulali Uviniga | | Linux, Software
Njalo lapho sikhuluma ngohlelo olususelwa ku-Linux, into yokuqala thina efika engqondweni Ubuntu, esizuze indawo ebaluleke kakhulu kubo bonke labo abakhetha lolu hlobo lohlelo lomthombo ovulekile; ngenxa yobuhle uBuntu anabo namuhla, singacishe siqinisekise ukuthi okufanayo izuze isikhundla esihle kunezinye ezifanayo. IPorteus uhlelo olusebenzayo futhi olususelwe kuLinux, olusinikeza izici ezithokozisayo kusukela lapho silulanda.
Ngalesi sizathu, ukuze sikwazi ukusebenzisa lolu hlelo lokusebenza lwePorteus, sizoqala ngokusho indlela esingafika kuyo yenze ngendlela oyifisayo ukuthi ibe nalokho okudingwa yiqembu lethu ngamaqhinga amancane avele nasesandleni sohlelo lonjiniyela "," osiphakamise njengomsizi omncane owenzelwe bonke labo abafisa ukuwusebenzisa.
1 Ukusetha izintandokazi zethu zokuqala ePorteus
Ukusetha izintandokazi zethu zokuqala ePorteus
Leyo yingxenye ethakazelisa kunayo yonke, ngoba njengoba siphawulile esigabeni esandulele, unjiniyela wePorteus uphakamise ngaphakathi kwewebhusayithi yakhe umsizi omncane njengohlelo oluku-inthanethi; Lapho sizoba nemingcele eminingana yokuphatha kalula, okuzosisiza ukuthi sithole kuphela lokho ikhompyutha yethu ye-PC engakusekela.
Le yindawo yokuqala esizoyithola kusile wizard, lapho kufanele sikhethe uhlobo lohlelo lokusebenza esifuna ukuba nalo ngokwendlela eyakhiwe ngayo i-PC yethu; okokuqala singakwazi khetha phakathi kwenguqulo engu-64-bit no-32-bit, eyokugcina, efaneleke ngokuphelele kumakhompyutha anezakhiwo zombili. Uma siqinisekile ukuthi ikhompyutha yethu ine-processor engu-64-bit kufanele sikhethe enye indlela yesibili.
Singakhetha futhi uhlobo lwesixhumi esibonakalayo esifuna ukusibuka uma sisebenzisa i-Porteus, ngezinketho zalokhu, lapho kuboniswa khona kuphela njengewindi lokugcina futhi nesibonisi sokuqhafaza.
Engxenyeni yesithathu yale ndawo sizothola ukuthi kungenzeka khetha kusuka kuzakhiwo ezihlukile zedeskithophu, kufanele sikhethe eyodwa kuphela esifuna ukuba nayo uma lolu hlelo olusebenzayo lwe-Linux lusebenza.
Le yindawo yesibili esizothola kuyo, lapho singachaza khona indawo yethu yesikhathi; yize "I-Factory" iza ngokuzenzakalela, kungahle kube lula ukuthi ngokuzikhethela sizikhethele izwe lapho sikhona.
Ikhibhodi enye into esingakwazi ukuyiphatha kalula kusuka kule ndawo, kuya ngalena esinayo kwi-PC yethu.
Yize umsindo wevolumu besingawulawula ngaphandle kwenkinga ngokhiye bekhompyutha yethu, kepha lapha singachaza futhi le pharamitha uma sifisa.
Ukuqhubeka kancane phansi kuyindlela ongayishayela "izinketho ezithuthukile", okufanele isetshenziswe kuphela ngochwepheshe ezinhlelweni ezisebenza nge-Linux.
Kuya ngokuthanda kwethu ukusebenzisa isiphequluli se-Inthanethi, into yokuqala esingayikhetha ikule ndawo; IMozilla Firefox, iGoogle Chrome neOpera zikhona lapha, kukhethwa eyodwa kuphela esazi ngayo.
Sizophinda sibe nethuba lokukhetha iprosesa yamagama esifuna ukusebenza ngayo, sine-AbiWord ne- LibreOffice.
Uma sizosebenzisa ingqungquthela yevidiyo singakhetha futhi i-Skype njengeklayenti lethu esilithandayo; Uma singeke sisebenzise le nsizakalo, kufanele sikhethe isithonjana nge-X.
Akungabazeki ukuthi lezi yingxenye ethakazelisa kakhulu futhi ebaluleke kunazo zonke, ngoba uma sifuna i-PC yethu isebenze ngokushesha nganoma yimuphi umsebenzi esinquma ukuwenza, khona-ke kufanele khetha umshayeli ofanele wekhadi lakho levidiyo esinazo, njengezinketho zokukhetha i-ATI Amd Radeon kanye ne-nVidia; Uma singenawo lawa makhadi evidiyo, singakhetha isithonjana sephengwini, okusho ukuthi sizovumela i-Linux ukuthi imise ngokuzenzakalela ikhadi lethu levidiyo.
Ngokuya ngohlobo lomsebenzi esihlela ukuwenza, lapha singakhetha futhi ukusebenzisa iphrinta noma cha.
Uma silungiselele kahle yonke imingcele esikhonjiswe yona ngokwalokho esikuphakamisile, lapho-ke kuzodingeka sikwenze cindezela inkinobho ethi "Yakha" (yakha noma yakha), okuzokhiqiza isithombe se-ISO ngohlelo olusebenzayo lwePorteus kanye nokuncamelayo esikukhethile kuyo yonke inqubo.
Ukuze ukwazi ukubona lonke leli fayela kusithombe se-ISO, kufanele ulinamathisele ngohlelo lokusebenza olukhethekile ukuze kamuva ukhiphe wonke amafayela bese uwakopisha empandeni ye-USB flash drive; le ndlela idinga ukuthi kamuva yenza i-USB pendrive bootable yakho. Ungakhetha futhi ukusebenzisa uhlelo oluphatha izithombe ze-ISO nalokho dlulisa konke okuqukethwe (kufakwe ibhuthi) maqondana ne-USB pendrive yethu.
Kamuva uzodingeka kuphela qala kabusha i-PC ngenduku ye-USB (noma i-CD-ROM) equkethe zonke izinhlelo zokusebenza ezidlulisiwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » IPorteus: Umhlahlandlela ophelele wokuba ne-Linux OS kwi-PC yakho
UHector D 'Argenta kusho
UPorteus muhle, ngiyisebenzisa njengamanje.
Phendula uHéctor D 'Argenta
porteus muhle kakhulu ngisebenzisa inguqulo 3, kusuka kwi-hard disk yami ngiyiqala ngama-grun4dos
Polarr, indlela elula yokuhlela izithombe mahhala kuwebhu